Vaovao - Ny Weibo Company dia mitazona ny kaonferansa asa 2021
Weibo Company mitazona fihaonambe momba ny asa 2021
Ny marain'ny 1 martsa lasa teo dia nikarakara fivoriana niasa 2021 tao amin'ny efitrano fihaonambe C3 ny orinasa. Ny fivoriana dia notarihan'ny lefitra jeneraly lefitra Liu Wei, ary i Xue Gangyi, talen'ny mpitarika ny Weibo, ary ny tale jeneraly Li Dong, ny tale jeneraly lefitra Qi Jifei, Niu Deqing, ary ny lehiben'ny manam-pahefana ara-bola, Liu Runhong, no nanatrika ny fivoriana.
Ny tale jeneraly Li Dong dia nanao tatitra momba ny asa tamin'ny kaonferansa mitondra ny lohateny hoe "Manamafy ny fototra, manatsara ny kalitao ary manamafy ny asa lehibe, miezaka manombohana ny dia vaovao an'ny fampandrosoana" Dimy faha-14 "an'i Weibo; Ny mpitantana jeneraly Li Dong dia nanipika rehefa nandinika ny asany tamin'ny taona 2020, Teo ambany fitarihan'ny komitin'ny antoko ny vondrona vondrona sy ny orinasa mandeha ho azy, ny orinasa dia mifikitra amin'ny fitarihan'ny antoko ary mampihatra ny fanapahan-kevitra lehibe sy ny fanaparitahana ny komity foiben'ny antoko . Mba hahatratrarana ny fampivoarana avo lenta ny orinasa ho mpitari-dalana, mifantoha amin'ireo tondro ara-toekarena isan-taona sy ireo asa lehibe, mamaly am-pitoniana sy an-keriny ireo olana sy fanamby, mandrindra ny fampandrosoana ny orinasa ary ny fisorohana sy ny fifehezana ny valanaretina pnemonia miandoha. ary manao asa mafy amin'ny varotra, fikarohana ary fampandrosoana, famokarana ary fitantanana Voka-dehibe dia tratra tamin'ny fanatsarana tsy tapaka ny kalitaon'ny orinasa sy ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina ary ny tanjona lehibe sy ny lahasa amin'ny dingana "fanamafisana" dia tratra soa aman-tsara, ary ny elanelana misy amin'ny "fivoarana avo lenta" dia nihalalaka kokoa.
Ny tale jeneraly Li Dong dia nanolotra ny tanjona kendrena tamin'ny 2021. Navoitrany mazava koa fa ny 2021 dia tsingerintaona faha-100 niorenan'ny antoko Komunista China ary ny fiandohan'ny "Drafitra Dimy Faha-14". Ny orinasa dia hampihatra tanteraka ny vaomieran'ny antoko foibe, orinasan'ny vondrona, orinasam-pahefana ary tompon'andraikitra amin'ny orinasa eo ambany fitarihan'ny vanim-potoana sosialista vaovaon'i Xi Jinping miaraka amina toetra sinoa. Ny fanapaha-kevitra sy ny fanaparitahana ny fivoriana sy ny filankevi-pitantanana, manaraka ny "fivoarana avo lenta", mampihatra ny hevitra momba ny asa "fanatsarana", manatsara ny fanavaozana, manamafy ny fanavaozana, ary miorina amin'ny fampandrosoana "famokarana", hanatsara ny ambaratonga ny indostria efa misy ary manitatra ny làlan'ny vokatra vaovao ho toy ny teboka fanombohana. Manitatra ny orinasa lehibe momba ny sensor isolation power, miditra amin'ny sehatry ny sensor vaovao, ary manafaingana ny fanitsiana ny sehatry ny fandrefesana sy ny fifehezana.
2021 no taona voalohany tamin'ny fanovana sy fanavaozana ny orinasa. Ity dia taona voalohany amin'ny "Drafitra Dimy faha-14". Ny iraka ataontsika dia efa an-taratasy. Weibo no orinasa iraisanay sy fonenanay. Tsy maintsy mizara ny faniriana mitovy isika. Miaraha miasa mafy. “Ny zavatra sarotra eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy atao mora foana, ary ny zavatra lehibe eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy atao amin'ny antsipiriany.” Tokony hamaly am-pahavitrihana ny antson'ny orinasa “hanova sy hanatsara ny fahombiazany” isika, hiditra am-pilaminana amin'ny lalao ary handray andraikitra mavesatra. Miezaha ho tsara toetra kokoa, ho Weibo tsara kokoa!
Fahamarinana avo lenta Ac Sensor ankehitriny, Fanjifana herinaratra ambany DC Sensor ankehitriny, Hall Sensor ankehitriny, Hall Effect Sensor ankehitriny, Sensor amin'izao fotoana izao, Hall Effect Ac Sensor ankehitriny,